Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo war kasoo saaray cabasho laga gudbiyay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo war kasoo saaray cabasho laga gudbiyay
Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa ka jawaabay cabasho ay soo gudbiyeen xildhibaano ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay xilkaasi oo ay sheegeen in gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle uu faragalin toos ah ku haayo.
Guddiga waxa ay sheegeen in dib loo dhigay doorashada kursiga cabashada laga soo gudbiyay ilaa maalinta berri ah.
Waxa ay sidoo kale ugu baaqeen Musharaxiinta in ay dib ugu soo laabtaan magaalada Jowhar si ay doorashada uga qeyb galaan.
Kursigaan waxaa ku tartamaya Musharaxiinta kala ah 1. Xasan lidow Muxumed Kobac, 2. Cusmaan Axmed Macow, 3. Cabdinuur Ibraahim Nuur.
Previous articleDoorashada labo kursi oo Aqalka Sare ka tirsan oo maanta ka dhaceysa Jowhar